Raw Estradiol Enanthate ntụ ntụ (4956-37-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Hormones / Estradiol ntụ ntụ Usoro / Estradiol Enanthate ntụ ntụ
SKU: 4956-37-0. Categories: Estradiol ntụ ntụ Usoro, Hormones
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Estradiol Enanthate ntụ ntụ (4956-37-0), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Estradiol Enanthate ntụ ntụ bụ hormone estrogen nwanyi. Ọ na-arụ ọrụ site na dochie estrogens na nwanyị nke na-enwekwaghị ike ịmịpụta estrogen ..A raw na-enye 99-4956-37 dị ọcha (CAS 0-XNUMX-XNUMX) ọcha iji dochie estrogens na nwanyị ma ọ bụ iji mee ka ọnọdụ nke hormones dị mma.
Estradiol Enanthate ntụ ntụ video
Raw Estradiol Enanthate ntụ ntụ isi Characters
aha: Estradiol Enanthate
Molekụla Formula: C25H36O3
Ọbara arọ: 384.55
Raw Estradiol Enanthate ntụ ntụ ojiji na steroid usoro
Estradiol Enanthate (CAS 4956-37-0) (INN, USAN), ma ọ bụ estradiol heptanoate, bụ ihe sịntetik, estrogen steroids na estrogen ester.
Raw Estradiol Enanthate ntụ ntụ Usage
Jiri estradiol enanthate dị ka dọkịta gị gwara gị. Lelee akara na ọgwụ ahụ maka ntụziaka ntụzi kpọmkwem. Lelee akara na ọgwụ ahụ maka ntụziaka ntụzi kpọmkwem.
Ịdọ aka ná ntị na Raw Estradiol Enanthate ntụ ntụ
I kwesịghị iji estradiol enanthate ma ọ bụrụ na ị nwere: ọrịa imeju, ọrịa ọgbụgba ọbara, ọbara ọgbụgba dị iche iche, akụkọ banyere ọrịa kansa hormone na-adabere (dịka ara, akpa nwa, nwanyị na-azụ anụ, ma ọ bụ ọrịa cancer thyroid), maọbụ ọ bụrụ na i nwee obi ọgụ, ọrịa strok, ma ọ bụ eriri ọbara.
Akwukwo Estrogens ka ekwuputara ime ka enwere oria nke afo (endometrial) na ndi inyom ndi na-abia site na muta ndi mmadu, karia n'ime nwanyi ndi na-enweta usoro ọgwụgwọ horrosone estrogen. Estrogens nwekwara ike ime ka ọrịa cancer nke ovary ma ọ bụ ara pụta. E kwesịghị iji ọgwụ ndị nwere eriri afọ mee ihe iji gbochie ọrịa obi. Estrogen e nyere na hormone ọzọ (progestin) maka ọgwụgwọ na-emechi emechi na-akpata ọrịa obi (dịka, mgbu obi), ọrịa strok, akwa ọbara dị na ụkwụ ma ọ bụ ngụgụ (ermonary embolism / deep vein thrombosis), dementia, na cancer nke ara. Ihe ize ndụ ndị a na-egosi na ha na-adabere na ogologo oge estradiol cypionate na ọnụ ọgụgụ nke estrogen kwa dose. Ya mere, a na-eji estpel cypionate mee ihe maka oge kachasị dị ogologo na ọgwụ kachasị dị ala ka i wee nweta uru ma belata ohere nke mmetụta dị njọ site na ọgwụgwọ ogologo oge.
Raw Estradiol Enanthate ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Estradiol Enanthate ntụ ntụ (CAS 4956-37-0) site na AASraw
AAS raw na-enye 99% Estradiol Enanthate ọcha ntụ ntụ iji dochie estrogens estest na nwaanyị.
Estradiol Enanthate Ebu Powder Ezi ntụziaka
1 nyochaa maka Estradiol Enanthate ntụ ntụ
Estradiol Enanthate ntụ ntụ bụ ọgụgụ isi